Hafatry ny Papa ho an’ny Karemy 2015 : Tazomy mafy - Fihirana Katolika Malagasy
Hafatry ny Papa ho an’ny Karemy 2015 : Tazomy mafy
Daty : 14/02/2015
“Ry rahalahy sy anabavy malala,
Kanefa izao tontolo izao dia mihidy aman-trano no sady manakatona ilay varavarana fidiran’Andriamanitra ao amin’ny olombelona sy ny olombelona ao amin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy tokony ho gaga ilay tanana, dia ny Fiangonana, rehefa voatosika, voahosihosy sy maratra. Izany indrindra no ilàn’ny vahoakan’Andriamanitra fihavaozana, hiala amin’ny tsy firaharahiana sy tsy hihidy aman-trano. Ireto misy soridalana telo zaraiko aminareo mba handinihana izany fihavaozana izany.
Fotoana tsara ny Karemy hamelàna an’i Kristy hanompo antsika sy hampianatra ny fomba fanompoany. Amin’ny alalan’ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra izany, sy ny fandraisana ny sakramenta, indrindra fa ny Eokaristia. Ao isika no manjary lasa ilay raisintsika : Vatan’i Kristy. Noho io vatana io, tsy hahazo laka ao am-pontsika intsony ny tsy firaharahiana. Satria izay an’i Kristy dia vatana iray aminy ka tsy misy intsony ny samy maka ho azy. “Raha misy rantsana iray monja marary, miara-marary aminy ny rantsana rehetra ; raha misy rantsana iray ravo, miara-paly aminy avokoa ny rehetra” (1 Kor 12, 26).
Noho izany, ry rahalahy sy anabavy malala, maniry hiara-mangataka aminareo amin’i Kristy aho amin’izao Karemy izao : “Fac cor nostrum secundum cor tuum” : “Ataovy manahaka ny fonao ny fonay” (litanian’ny Fo Masin’i Jesoa). Dia mba hanana fo matanjaka sy feno fiantrana, fo mahatsinjo sy feno fitsimbinana, tsy mikainkona samirery sy misangodi-panina ao anatin’ny fanatontoloan’ny tsy firaharahiana ny hafa.
(Dikan-teny ho an'ny katolika.org: Ignace Rasolo)
< Hafatry ny Papa noho ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpifindra monina sy mpialokaloka
Hafatry ny Papa ho amin'ny FIANTSOAN'ANDRIAMANITRA >